Talyaaniga oo Markab dagaal u soo diray xeebaha Soomaaliya | raascasayrmedia.com
← Dayactir Laga Waday Dugsiga Hoose/Dhexe ee Baargaal oo lasoo gaba gabeeyey (Sawirro)
Farmaajo: “Waan wadaynaaa howgalada lagula dagaalamayo Shabaab” →
March 4, 2011 · 11:13 pm
Talyaaniga oo Markab dagaal u soo diray xeebaha Soomaaliya
Dowladda Talyaaniga ayaa waxaa ay sheegtay in mid ka mid ah Maraakiibteeda dagaalka ay u dirtay Xeebaha Soomaaliya si uu ugu biiro howlgalka Caalamiga ah ee la dagaalanka kooxaha burcad badeeda Soomaalida.
Sida lagu Xusay Bayaan kasoo baxay Taliska ciidamada badda ee Talyaaniga, Markabkaani ayaa waxaa uu si toos ah qeyb uga noqon doonaa howlgalka Midwoga Yurub kaasi oo looga gon leeyahay gaaf wareegidda, ilaalinta xeebaha Soomaaliya iyo galbinta Maraakiibta u kiraysan Hay’adda Cunada aduunka ee WFP.
Bayaan ayaa intaasi ku daray in Markabkaani dagaal ee wadanka Talyaaniga laga leeyahay ay saaranyihiin ilaa 221-Askari oo ka tirsan Ciidamada Mariiniska ee dalkaasi, iyadoo la sheegay in Markabkaasi uu badali doono Markab kale oo laga leeyahay isla dalkaasi oo in mudo ah ku sugnaa xeebaha Soomaaliya.
Dowladda Talyaaniga ayaa go’aansatay inay sii xoojiso howlgalada looga hortagayo kooxaha burcad badeeda Soomaalida kadib markii bishii lasoo dhaafay Markab laga leeyahay dalkaasi uu gacanta galay burcad badeeda Soomaalida.
Dowlado farabadan badan oo caalamka ah ayaa isu bahaystay sidii looga hortagi lahaa kooxaha burcad badeeda Soomaalida hase ahaatee su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxaa ay tahay burcad badeeda Soomaalida wax maka qabteen Marakiiba dagaalka ah ee ku sugan xeebaha Soomaaliya.